असिनापानीले पाकेको बाली नष्ट : RajdhaniDaily.com -
Home प्रदेश प्रदेश ७ असिनापानीले पाकेको बाली नष्ट
बैतडी । असिना पानीले बैतडीका बिभिन्न ठाउँमा किसानको खेतमा पाकेको बाली र तरकारी नष्ट गरेको छ । अविरल बर्षासँगै आएको असिनाले गहुँ, जौ बाली, दलहन, तरकारी बाली र फलफूल खेतीमा व्यापक क्षति पुर्याएको पाटन नगरपालिका वडा न. १ का स्थानियबासी तर्क ठगुन्नाले बताए ।
आइतबार राति एक्कासी आएको असिनापानीले पाटनका सबैजसो ठाउँमा क्षति पु¥याएको उनले बताए । आफ्नो करिब १५ रोपनी जमीनमा लगाएको अन्नबाली नष्ट भएको छ । खेतिपातिमै आत्मनिर्भर रहेका किसानहरुलाई अब के खाने भन्ने चिन्ता बढेको ठगुन्नाले बताए ।
यस्तै बालिनालीका साथै फलफुलका बोटबिरुवासमेत नष्ट गरेको दशरथचन्द नगरपालिका वडा न १ का हरिष टेरले बताए । किसानहरुको बर्षभरिको मेहेनत खेर गएको उनले बताए ।
यसअघि गत मंगलबार परेको असिनाले जिल्लाको पुचौर्डी नगरपालिकाका अधिकांश क्षेत्रमा असिनाले गहुँबाली नष्ट गरेको थियो । असिनाले नगरपालिकाको वडा नं ८ मा धेरै क्षति पुर्याएको स्थानीय किसान रामबहादुर धानुकले बताए ।
पाक्नै लागेको गहुँबालीमा असिनापानीले व्यापक क्षति पुर्याएको छ । यो समयमा बालिनाली नष्ट भएकाले जम्मा बालिनालिका १० प्रतिसत समेत प्रयोगमा ल्याउनन नसकिने कृषि ज्ञान केन्द्रका निमित्त प्रमुख कर्णबहादर चन्दले बताए । पाकिसकेको बाली भएकाले असिना परेको ठाउँमा ९० प्रतिशत बढी क्षति भएको उनको भनाइ छ ।
बैतडीका १० ओटो पालिकाका बिभिन्न ठाउँमा अविरल बर्षासँगै आएको असिनाले बालीनाली नष्ट भएपछि किसानहरु चिन्तित बनेका छन् ।
कौशिला कुँवर - October 14, 2020 0
किरण कौशल - June 25, 2020 0
प्रदेश ३ रासस - May 12, 2020 0
बिचार डा. देवीप्रसाद आचार्य - January 28, 2021 0
Not-to-be-missed एजेन्सी - September 30, 2020 0
समाज राजधानी समाचारदाता - June 28, 2020 0
अर्थ निराजन पौडेल - June 18, 2020 0
कसरी आइपुगे उदयपुरमा यति धेरै संक्रमित
Editor-Picks ईश्वर तामाङ - April 22, 2020 0
उदयपुर । उदयपुरमा थप १० जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ । उनीहरू सबै त्रियुगा नगरपालिका भुल्केस्थित मस्जिदमा रहेका १३ जना...